Posted by အဇဋာ on Jun 26, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
နောက်ပြီးတော့ ပေးသတင်း၊ လိုက်သတင်း၊ ထုတ်နှုတ်သတင်းဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျ။ ပေးသတင်းဆိုတာတော့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က သတင်းထောက်ကို ယူစေချင်တဲ့၊ သူတို့သတင်းကို ရေးပေးစေချင်တဲ့ သတင်းမျိုး။ လိုက်သတင်းကတော့ အထက်က အကြောင်းအရာတွေလိုမျိုး၊ ထုတ်နှုတ်သတင်းက ကြေငြာချက်၊ သတင်းစာ၊ ဟောပြောချက်၊ အစည်းအဝေးပွဲတွေကနေ သတင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အကြောင်းတွေကို ထုတ်ရေးရတာ။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ ခုနောက်ပိုင်းမှ ပေါ်လာတာပါ။ “ကုတ်(Quote) ပေါင်းချုပ်” တဲ့။ သတင်းဆောင်းပါးတွေ ရေးတဲ့နေရာမှာ ခပ်ပျင်းပျင်းရှိတဲ့သတင်းထောက်က ပြောစကားတွေနဲ့ချည်း ရေးထားတဲ့ သတင်း ဒါမှမဟုတ် သတင်းဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်တွေ အချင်းချင်း “ကုတ်(Quote)ပေါင်းချုပ်” လို့ စနောက်ကြတယ်။
အဲဒီနေ့က တော်တော်ကို ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဂျာနယ်တိုက် တွေအများကြီးပါလာပါတယ်။ Venus, Farmers(ဂျာနယ်သစ်), Popular News, True News, 7Day, The Voice, ဧရာဝတီ(Online Media), DVB စသဖြင့် ဂျာနယ်လစ်အယောက် ၂၀ လောက်ပါလာပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း တစ်နေရာကို သွားဖို့ဆိုတာ စိတ်တောင်မကူးရဲတဲ့ကိစ္စပါ။ အဲဒီလို စုပေါင်းပြီး သွားကြပြီဆိုရင် အင်မတန်ပျော်ကြပါတယ်။
နောက်တော့ အဲဒီဂိတ်စောင့်က C.O အဆင့်ရှိတဲ့ ဗိုလ်တစ်ယောက်ကို သွားခေါ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလူက ပြောတယ်။ သူဒီကိစ္စကို မပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့။ သူ့အထက် G2 လာမှပဲ ပြောနိုင်ပါမယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ကို တပ်ထဲလည်းပေးမဝင်ဘူး၊ သူတို့တပ်ရဲ့ အပြင်ဘက် လယ်ကွင်းစပ်နားမှာပဲ စောင့်ကြရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်တစ်ဖွဲ့လုံး တပ်ရှေ့က အုတ်ခုံတွေပေါ်မှာ ထိုင်၊ စကားပြောတဲ့သူကပြော၊ C.O ဗိုလ်ကြီးကို ဝိုင်းပြီး ကျပ်တဲ့သူက ကျပ်နဲ့။ G2 ကိုစောင့်ကြရပါတော့တယ်။ အဲဒီ C.O ကပြောပါတယ်။ နောက်နေ့မှလာတဲ့။ ကျွန်တော်တို့က ဖောင်ပိတ်ရက်နဲ့ ချိန်ပြီးလုပ်ကြရတာဆိုတော့ နောက်ရက်ကို မလာနိုင်ဘူး၊ နောက်ပြီး ဒီနေရာက လာရတာ အင်မတန်ဝေးတယ်။ တစ်စုတစ်ဝေးထဲလာမှလည်း စိတ်ချရတယ်လေ။
၅ မိနစ်လောက်အောင့်ခံပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမှ မရတာနဲ့ အဲဒီ C.O ဆိုတဲ့သူကိုပဲ အကူအညီတောင်းရပါတော့တယ်။ ဗိုလ်ကြီး ကျွန်တော်နောက်ဖေးသွားချင်လို့ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဗိုလ်မှုးတော်တော် ခေါင်းစားသွားပါတယ်။ တပ်အဝမှာလည်း စစ်သားတွေက အခြေအနေကြည့်နေတယ်။ နောက်ဆုံးဗိုလ်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ရပါတယ် တဲ့…ဟေ့ကောင်လေး သူ့ကို အိမ်သာလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့။ တစ်ခြား ဘော်ဒါသတင်းထောက်တွေကတော့ ဟေ့ကောင်တဲ့ မင်းကို အိမ်သာတက်နေတုန်းသော့ခတ်ထားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ တပ်ထဲကို အီးပါဖို့ ဝင်သွားပါလေရော။ ကျွန်တော့်ဘေးက ၂ ရစ်ရယ်၊ တစ်ပွင့်ရယ်၊ စစ်သားနှစ်ယောက်ပါလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က သူတို့တပ်မြေထဲမှာ လမ်းတစ်ဝက်လောက်ကျိုးနေပြီ။ နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ ပြေးမယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြင်က သတင်းထောက်တွေကလည်း စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကြည့်နေကြတယ်(ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး)။ တပ်ထဲကို ဘယ်သူမှ မဝင်ရဘဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဝင်သွားလို့ပဲလားတော့မသိဘူး။ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ စစ်သားတွေကလည်း စူးစမ်းတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေကြတယ်။ လမ်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်။ တပ်ထဲမှာ အီးတစ်ခါပါဖို့ မလွယ်ပါလားလို့တောင်တွေးမိလိုက်သေးတယ်။
အဲဒီနေ့ က G2 ဆိုတဲ့သူလည်းရောက်မလာဘဲ ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်တွေသာ သတင်းရှုထောင့် ဘယ်လိုရေးမလဲစဉ်းစားကြရင်း ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်လာခဲ့ရတော့တယ်။ အဲဒီလို တစ်နေကုန်သတင်းလိုက်ရင်း သတင်းရေးစရာ လောက်လောက်လားလား အထောက်အထားမရတဲ့ ရက်တွေလည်း အများကြီးပါပဲဗျာ။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါမယ် ဗျို့ ။ ကိုမြတ်ကျော်သူ့ ဇါတ်လမ်းမျိုး မဖတ်ဖူးသေးဘူး ။ ဦးသောင်း တို့ ခေတ်က ဦးသောင်း သတင်းထောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတော့ ဖတ်ဖူးတယ်။
အဲ့လို ဘ၀ မျိုးကို စာနာ ကိုယ်ချင်းစာ ပါတယ်။ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရေ …. အပိုင်း အပိုင်း နဲ့ ခပ်မြန်မြန် ဆက် စေချင်ပါတယ်။
ဗဟုသုတ ရပါတယ် ကိုမြတ်ကျော်သူရေ။ အားပေးနေပါတယ်။
စစ်သားအစောင့်အရှောက်နဲ့ အီးပါတဲ့ ကိုဇလွန်ရွာသားရေ။Bravo!!!!!!!!
ဒီလို ကင်မရာ နောက် ကွယ် က အကြောင်း အရာ တွေ ကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ကျမ တို့ နိုင် ငံမှာ သတင်းထောက် တယောက် ရဲ့ ဘ၀ က ထောင်နှုတ်ခမ်း နင်းလျှောက်ရသလိုပဲ။ ဆက်လက် ဝေမျှမယ့် အတွေ အကြုံ တွေ ကို စောင့် မျှော်နေပါ့ မယ်။
ညီလေး အဆင်ပြေလား ရေရှိလား ဟာ အိမ်သာတံခါးကြီးပိတ်လိုက်ဦးဟ
ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ နောက်ရေးမယ့်ပို့စ်တွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
သတင်းထောက် အလုပ်ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတာပါ၊ အလုပ်ကတခြား ဆိုတော့ စိတ်လျှော့ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားလေရာ ကင်မရာယူသွားတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်တိုင် သတင်းမဖြစ်အောင် နေ နေ တယ်၊ အသက် ကြီးရင် (အခုတောင် အတော်ကြီးနေပါပြီ) စာရေးမယ်စိတ်ကူးတယ်၊ အခုတော့ ထုချေလွှာ ရေးရင်း စာရေးကျင့်နေတယ်၊ အားကျလျက် ရှိကြောင်းပါ ဗျာ၊
အဲ့ဒီလို သတင်းလိုက်ရတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ အုပ်စုလိုက်သွားတာ စိတ်အချရဆုံးပဲ ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ မသိနိုင်ဘူး။
အရေးထဲကျမှ အရာကပေါ် ။ ဒါမျိုးကလည်း အရေးကြီးပြီလား ဆို ဖြစ်တတ်တယ်။ ကြုံဖူးသွားတာပေါ့။
စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ ဆက်ပါအုန်း။
မိုက်ဒလယ် သတင်းထောက်တွေကို စစ်တပ်က ခုလို ပြုစုဂရုစိုက်တာ သေချာသိတော့တယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းထောက်ဘ၀ကို ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမြတ်ကျော်သူရေ…
ခေါင်းစဉ်ကို နံပါတ်လေးတွေ တပ်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်…ရှေ့က ပို့စ်နဲ့ ရောမှာစိုးလို့ပါ…